Filtrer les éléments par date : mercredi, 24 avril 2019
mercredi, 24 avril 2019 23:56
Fantatrao ve ny atao hoe Fitsapan-kevibahoaka?
Misy fotoana ny mpitondra maka ny hevitry ny vahoaka mivantana, satria izy no tompon'ny fahefana (and 5 Lalampanorenana), ka misy fanontaniana apetraka, ka valiana ENY na TSIA. Tsy azo saratsarahana ny valiteny raha misy fanontaniana maromaro eo izany.
Azo zaraina roa io Fitsapan-kevibahoaka io, ao ny anontaniana ny vahoaka mikasika olona, indrindra ny mpitondra, plébiscite no anarany amin'ny teny frantsay.
Ohatra tamin'ny 1975, nanontaniana raha i Didier Ratsiraka no hitondra ny Firenena. tsy élection na fifidianana izy eo izany satria tsy misy mpifaninana, fa mamaly ENY na TSIA fotsiny. Misy ny vato fotsy sy ny vato maty, toy ny mahazatra.
Misy kosa ny hevitra no anontaniana. Référendum indray no iantsoana azy eo.
Azo zaraina roa ihany koa io réferendum io.
mercredi, 24 avril 2019 21:57
Jirama: Tapaka ny famatsiana solika ho an’i Toamasina
Vokatr’io fahatapahan'ny famatsiana solika io dia tsy afaka mamokatra herinaratra araka ny tokony ho izy ny tobim-pamokarana roa lehibe eto Toamasina, hoy ny avy amin’ny Jirama ka mety hampihatra "délestage" ny Jirama Toamasina rahampitso alakamisy 25 aprily 2019 manomboka amin'ny 6 ora maraina.
Milaza ny Jirama fa misy ny fitadiavana hevitra ahazoana solika mba hamerenana amin'ny laoniny ny famatsiana herinaratra haingana araka izay azo atao.
mercredi, 24 avril 2019 21:45
Mpaka ankeriny: Ravan’ny Zandary ny tambazotra iray
Jiolahy efa nokarohina hatry ny ela miisa efatra no saron’ny Zandary avy ao amin’ny “Section de recherches criminelles” etsy Fiadanana teny Mahitsy, Distrika Ambohidratrimo sy Ambodimita Ambohimanarina Antananarivo renivohitra ny 16 sy 18 aprily 2019 teo ka vehivavy ny roa tamin’izy ireo.
Ny 16 aprily 2019 teo dia teny Mahitsy no nahatratrarana mpivady mbola tanora izay efa malaza ary tafiditra tamin’ny asa fakana an-keriny ary fantatra ihany koa fa efa nanao fanafihana vola tao amin’ny mpikambana tamin’ny Kongresin’ny Tetezamita iray tamin’ny taona 2012.
Rehefa natao ny fanadihadiana dia nanonona ny namany miisa roa izy ireo ka nanao ny vela-pandrika rehetra ny Zandary. Eny Ambodimita no voalaza fa misy ireo namany ireo ka ny 18 aprily 2019 no nidinan’ny Zandary teny, ary tratra tao tokoa ireo olona roa ireo, ka lehilahy iray miaraka amin’ny anabaviny no tao izay tsy iza fa vadin’i Randriamanana Norbert na i Lama izay tena atidoha nikotrika ny fankana ankeriny nanomboka ny taona 1998 ary nokarohina fatratra tamin’izany fotoana izany.
mercredi, 24 avril 2019 21:29
Fitsarana: 14 067 ireo miandry fitsarana any am-ponja
Antotanisa tamin’ny febroary 2019, io navoakan’ny Amnesty International. 14 067 miandry fitsarana any am-ponja ka lehilahy ny 55 % amin’ireo.
Nisy fitomboana be io tarehimarika toarian’ny oktobra 2017, izay nahatratra 11 703 ireo notazomina am-ponja vonjimaika miandry fitsarana nanerana ny Nosy.
Ny fonja eto Madagasikara anefa tsy mahazaka voafonja mihoatra ny 10 600. Midika izany fa feno hipoka, tsy zarizary ary mijaly ny voafonja eto Madagasikara.
Marihina fa ny 25 aprily 2019 ny Andro afrikanina ho an’ny fitanana am-ponja vonjimaika.
mercredi, 24 avril 2019 19:27
Morondava: Nidoboka am-ponja ilay kandida depiote
Natolotra ny Fampanoavana teto amin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Morondava ny hariva teo i Raveloson Ludovic Adrien dit Leva Sydney, ilay kandida depiote ao Mahabo sy ny vadiny, izay mpiray lisitra aminy, ary ny zanany lahy taorian'ny famotorana nataon'ny Zandary teto an-toerana.
Oniversiten’i Toamasina: Mandray ny asany ny filoha vaovao Pr Zafitody Conscient
Tontosa tamim-pirahalahina androany teto Barikadimy ny famindram-pitantanana teo amin'i Pr Velo Jérôme, filohany Oniversiten’i Toamasina teo aloha, sy ny Pr Zafitody Conscient filoha vaovao, natrehan'ny Tale jeneralin’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.
Ny fifanankalozana sy fifampiresahana ary fifandeferana no politika entin'ny filoha vaovao mitantana ny Oniversiten’i Toamasina ; ny filoha teo aloha kosa nilaza fa be ny zava-bita tamin’ny fanatsarana ny Oniversiten’i Toamasina, isan'izany ny biraon'ny « Présidence » sy ny tranon'ny mpianatra ary ny efitrano fianarana, teo koa ny fanokafana lalampiofanana roa vaovao dia ny Physique Chimie sy ny Maths - Informatique.
mercredi, 24 avril 2019 15:48
Fitsapankevi-bahoaka: Samy hanana 15 minitra isan’andro ireo komity manohana ny TSIA sy ny ENY
Tontosa androany maraina tetsy Nanisana ny fisarihana ny filaharan'ny fandraisam-pitenenan'ireo komity mpanohana ao amin'ny haino amanjerim-pirenena (RNM sy TVM). Ny TSIA no handray fitenenana voalohany raha toa ka ny ENY kosa no handray fitenenana faharoa.
Samy hahazo anjara fitenenana ireo komity manohana ny TSIA sy ny ENY manomboka ny 27 aprily hatramin'ny 25 mey 2019 izany hoe : mandritra ny telopolo andro haharetan’ny fampielezan-kevitra mikasika ny fitsapankevi-bahoaka hanovàna ny Lalàmpanorenana.
Manana 2 minitra sy 30 segondra in-telo avy ny andaniny sy ny ankilany isan’andro, izany hoe hisy 15 minitra atokana hanehoan'izy ireo hevitra isan’andro, ka amin’ny 6h50, 12h50 ary 19h20 ny ao amin’ny TVM ; amin’ny 6h50, 13h35 ary 18h50 kosa ny ao amin’ny RNM.
mercredi, 24 avril 2019 13:42
CAN 2019: Hiatrika lalao ara-pirahalahiana telo ny Barea
Tafiditra amin’ny fanomanan-tena hiatrehana ny CAN 2019 hatao any Egypta afaka roa volana ireto lalao ara-pirahalahiana telo hatrehin’ny Barea Madagasikara ireto.
2 jona : Madagasikara # Luxembourg
7 jona : Madagasikara # Kenya
15 jona : Madagasikara # Mauritanie, lalao hatao any Maroc.
Fandraisana anjara voalohany ho an’i Madagasikara amin’ny dingana famaranana ny CAN ity. Vondrona B no misy an’i Madagasikara miaraka amin’i Nigeria, Guinée ary Burundi.
mercredi, 24 avril 2019 13:36
Programa nokleary Korea Avaratra: ihaona i Kim Jong-Un sy Vladmir Poutine
Efa tonga any Rosia ny filohan'ny Korea Avaratra, miaraka amin'ilay fiaran-dalamby maitso ahafantarana azy. Tonga ihaona amin'ny filoha rosianina Vladmir Poutine.
Tsiahivina moa fa mihenjana ny tady eo amin'ny Korea Avaratra sy Etat-Unis. Nisy fihaonana indroa miantoana teo amin'i Kim Jong-Un sy Donald Trump, amin'ny ampitsaharana tanteraka ny programa nokleary any Korea Avaratra, fa nandamoaka izany fifanarahana izany, izay nirava maina ny fihaonana faharoa tamin'ny volana febroary teo tany Vietnam.
mercredi, 24 avril 2019 10:22
Fitaterana anabakabaka: Mikasa hiditra eto ny Qatar Airways sy ny Emirates
Manomboka misarika kaompaniam-pitaterana anabakabaka vahiny ny sidina mandalo eto Madagasikara. Re fa anisany liana amin’izany ny Qatar Airways sy ny Emirates.
Tamin’ny fifanarahana nifamatoran’ny Air Madagascar sy ny Air Austral amin’ny maha mpiaramiombon’antoka stratejika an’ity farany, nanomboka tamin’ny 2017 anefa, dia tsy tokony hisy mpifaninana vaovao miditra ao anatin’ny telo taona, na dia iaraha-mahita aza ny fidiran’ny Ethiopian Airlines eto.